Soosaarayaasha Bib Aprons - Shiinaha Bixiyaasha & Warshadaha Bib Aprons & Warshadaha
Xargaha Caddaan ee Madoow ee Chef Bib Aprons oo leh Hal Pocket CU304S8600H
Nooca CADADA EE COD Code CU304S8600H Cabbirka KOOBKA Erayada muhiimka ah chef apron, bib apon, apron cudbida, Dharka labiska hoyga 65/35 poly / cudbi GSM.235g Dharka tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta xoog-sareeya. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta jirka, adkeysi ...
Qalabka jikada ee Dheelitirka Dhejisan oo La Heli Karo oo leh Laba Jeer oo CU305S8600H
Nooca CADADA EE COD Code CU305S8600H Cabbirka KOOBKA XANUUN ereyada furaha ah, kiishashka jikada, makhaayada cuntada, dharka isboortiga ee dharka 65/35 poly / suuf GSM.235g Dharka tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta xoog-sareeya. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta jirka, adkeysi u ...
Canvas Chef Bib Apron oo wata saddex jeebbood oo CU335S135022U4
Nooca CUDURKA CODKA CU335S135022U4 Cabbirka KALKA KOOXDA Erayada furaha ah ee loo yaqaan 'chef apron, bib apron', kanfarka shiraaca ah, dharka isboortiga ee dharka ah 45/55 poly / suuf GSM.300g Dharka tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaannaa dunta adag. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta dusha, resista ...
Midabka Buluugga ah ee loo yaqaan 'Canvas Chef Chef Bib Apron' oo leh saddex jeebadood CU335S048022U4
Nooca CADADKA CODKA CU335S048022U4 Cabbirka KALKA KOOBAHA Erayada muhiimka ah ee loo yaqaan 'chef apron, bib apron' canvasvasvas, lebiska soo-dhoweynta Muuqaalka 45/55 poly / suufka GSM.300g tolida dharka polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta xoogga-sare. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta dusha, resista ...
Midabka Jaalaha ah ee loo yaqaan 'Canvas Chef Chef Bib Apron' oo leh seddex jeeb oo CU335S043022U4
Nooca CADADKA CODKA CU335S043022U4 Cabbirka KALKA KOOBAHA Erayada muhiimka ah ee loo yaqaan 'chef apron, bib apron, canvas vevas', soo-jiidashada dharka ee dharka leh 45/55 poly / suufka GSM.300g tolida dharka polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta xoogga-sareeya. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta dusha, resista ...
Midabka cagaarka ah ee loo yaqaan 'Canvas Chef Chef Bib Apron' oo leh saddex jeebadood CU335S042022U4
Nooca CADADKA CODKA CU335S042022U4 Cabbirka KALKA KOOBAHA Erayada furaha ah ee loo yaqaan 'chef apron, bib apron' canvasvasvasvav, dharka isboortiga ee dharka ah 45/55 poly / suufka GSM.300g tolida tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta xoogga-sare. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta dusha, resista ...
Madoosh Madoow Chef Bib Apron oo wata Saddex jeebadood oo CU335S001022U4
Nooca CADADKA CODKA CU335S001022U4 Cabbirka KALKA KOOXAHA Erayada furaha ah ee loo yaqaan 'chef apron, bib apron', kanfarka shiraaca ah, dharka isboortiga ee dharka 45/55 poly / suuf GSM.300g Dharka tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaannaa dunta adag. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta dusha, resista ...
Poly Cotton Crossback jikada Chef Aprons CU352S119000AG
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CU352S119000AG Cabbirka KALKA KOOXAHA Erayada ugu muhiimsan ee iskutallaabta, apron Fabric 70/30 poly / suuf GSM.265g Dharka tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaannaa dunta adag. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciriiriga hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabbinta kuleylka, yari polyester-ka waa mid u adkeysan caariyayga, u adkeysi caariyaysi, iyo dixirigo….
Poly Cotton Crossback jikada Chef Aprons CU352S118000AG
Summadaha CHECKEDOUT Shayga COD Code CU352S118000AG Cabbirka KOOBKA XANUUNAHA Erayada muhiimka ah ee isgoysyada, apron Fabric 70/30 poly / suuf GSM.265g Dharka tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta xoogga. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciriiriga hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabbinta kuleylka, yari polyester-ka waa mid u adkeysan caariyayga, u adkeysi caariyaysi, iyo dixirigo….
Summadaha CHECKEDOUT Shayga COD Code CU352S117000AG Cabbirka KALKA SIZE Ereyada muhiimka ah ee isgoysyada, apron Fabric 70/30 poly / cudbi GSM.265g Dharka tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta xoogga. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciriiriga hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabbinta kuleylka, yari polyester-ka waa mid u adkeysan caariyayga, u adkeysi caariyaysi, iyo dixirigo….
Denim Bib Corssback jikada Chef Apron CU352S129000T
Nooca CADADKA CODKA CU352S129000T Cabbirka KOOXDA XARUNAHA FURAHA COSSBACK, xarkaha jikada 20/80 poly / suuf GSM.346g Xargaha tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaannaa taxane xoog-sareeya. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciriiriga hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta jirka, adkeysi u leh caariyaysi, oo aan ...
Dhab ahaantii Kahortagga Wrinkle Crossback Chef Apron CU355S134011U4
Summadaha CHECKEDOUT Shayga COD Code CU355S134011U4 Cabbirka KOOBKA Erayada ereyada furaha ah ee loo yaqaan 'Isboortiga' maqaar tayo sare leh, tufaax tayo sare leh Farsamaynta Dharka dhabta ah ee Jirka maqaarka toosan ee polyester ayaa sidoo kale loo yaqaannaa taxane xoog-sareeya. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta u adkaysata, u adkaysashada caaryada, iyo ...